Ole Ndị Na-aga Hel? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tongan Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ole Ndị Na-aga Hel?
Hel (ya bụ, “Shiol” na “Hedis” n’asụsụ ndị mbụ e ji dee Baịbụl) pụtara ili, ọ bụghị ebe a na-ata mmadụ ahụhụ n’ọkụ. Ole ndị na-aga hel? Ma ndị ezigbo mmadụ ma ndị ajọ mmadụ na-aga na ya. (Job 14:13; Abụ Ọma 9:​17) Baịbụl kwuru na ili a bụ ‘ụlọ nke onye ọ bụla dị ndụ ga-aga.’​—⁠Job 30:23.
Jizọs gadịrị hel ma ọ bụ Hedis mgbe ọ nwụrụ. Ma, “a hapụghị ya n’ime Hedis” n’ihi na Chineke kpọlitere ya n’ọnwụ.​—⁠Ọrụ Ndịozi 2:​31, 32.
Ndị gara hel hà ga-anọ ebe ahụ ruo ebighị ebi?
Ndị niile gara hel ga-apụta ọzọ. Jizọs ga-eji ike Chineke mee ka ha dị ndụ ọzọ. (Jọn 5:​28, 29; Ọrụ Ndịozi 24:15) Mkpughe 20:13 kwuru banyere mbilite n’ọnwụ ahụ a ga-enwe n’ọdịnihu, sị: “Ọnwụ na Hedis hapụkwara ndị nwụrụ anwụ nọ n’ime ha.” Mgbe ndị niile nọ na hel pụtachara, hel agazighị adị. E nweghịzi onye ga-aga ebe ahụ n’ihi na “ọnwụ agaghị adị ọzọ.”​—⁠Mkpughe 21:​3, 4; 20:14.
Ma, ọ bụghị onye ọ bụla nwụrụnụ na-aga Hel. Baịbụl kwuru na e nwere ndị ihe ọjọọ bara n’ụmị nke na ha enweghị ike ichegharị. (Ndị Hibru 10:26, 27) Mgbe ndị dị otú ahụ nwụrụ, ebe ha na-aga abụghị hel, kama ha na-aga Gehena nke nọchiri anya mbibi ebighị ebi. (Matiu 5:​29, 30) Dị ka ihe atụ, Jizọs kwuru na ụfọdụ ndị ndú okpukpe ihu abụọ e nwere n’oge ya ga-aga Gehena.​—⁠Matiu 23:27-​33